Miyay ebikeedu yihiin mustaqbalka kireysiga baaskiil la'aanta dadweynaha? | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn blog News Miyay ebikeedu yihiin mustaqbalka kireysiga baaskiil la'aanta dadweynaha?
Taariikhda ： 2021-06-15 Qeybaha ：News Muuqaalada ： 1,557 aragti
In kasta oo ay ku jirtay Ameerika iyo Yurub in ka yar sannad, haddana qaybta baaskiil la'aanta ayaa si dhakhso leh ugu faafaysa adduunka.
Waxa ka bilaabmay Seattle iyada oo tijaabo laga soo amaahday Shiinaha ayaa tan iyo markii uu ku faafay magaalooyin ka mid ah Los Angeles iyo Washington, DC Iyo inta ay saraakiisha dawladdu isku dayayaan inay xalliyaan qaar ka mid ah arrimaha cusub ee saadka-Baaskiiladaha oo noqda kuwo isdaba-joog ah oo qashin ah oo ku yaal Dallas, marka loo eego hal-hawlwadeennada ayaa horay u sii amraya oo leh isbeddelka soo socda ee kacdoonkii bilaa xadka: baaskiilada korantada.
Jump, oo ah shirkad bilow ah oo fadhigeedu yahay Brooklyn, ayaa noqotay shirkaddii ugu horreysay ee bilaa xayiraad ah oo soo saarta baaskiiladaha elektaroonigga ah markii ay ka billaabatay DC bishii Sebtember. Bishii la soo dhaafay waxay sidoo kale ku guuleysatay qandaraaskii ugu horreeyay ee lagu bilaabo ka shaqeynta baaskiilada elektaroonigga ah ee San Francisco. Shirkadda LimeBike ayaa soo bandhigtay Baaskiilkeeda elektaroonigga ah ee bilaa xirashada ah iyadoo lagu soo bandhigayay Sannadkan Macaamiisha Elektaroniga ee Las Vegas Shirkadaha kale, sida Spin iyo Motivate, waxay ku dhawaaqeen duuliyeyaasha elektaroonigga ah isla waqtigaas. Xitaa Uber ayaa ku dhaqaaqday ficilka, iyadoo ku dhawaaqeysa inay u oggolaaneyso dadka isticmaala inay helaan baaskiilada Jump iyagoo adeegsanaya barnaamijka wadaagista wadaagga.
Noocyo badan oo teknolojiyad cusub ah ayaa ka dhigaya shabakadahan soo koraya e-baaskiil suurtagal. Horumarrada ku saabsan qalabka elektarooniga ah, sida laptop-ka, waxay keeneen baytariyada Lithium-ion ee hagaagsan oo ka fudud kuwa kalena sii haya. Horumarka GPS iyo astaamaha unugyada ayaa sahlaya in la raaco raxan baaskiillo agagaarka aagga mitrooga. Sababtoo ah baahida sii kordheysa ee Yurub iyo Aasiya, qaybaha sida dareemayaasha xaddiga iyo matoorrada ayaa noqdey kuwo la awoodi karo oo tayo sare leh.
"Qaybaha saxda ah ee baaskiilkeena kujira hada, qeybahaas lama helin xitaa sanad iyo bar ama labo sano ka hor," ayuu yiri Ryan Rzepecki, oo ah madaxa shirkada Jump. Baaskiiladaheena waxaa saaran masaafo dhan 40-mayl, taas oo ka dhigaysa waxa aan qabanayno mid aad u macquul ah. ”
Nidaamyada badankood ee bilaa-baaskiil la'aanta ah waxay leeyihiin qaab isku mid ah. Baabuurtu waxay soo dejistaan ​​barnaamij taleefan, kaas oo u oggolaanaya iyaga inay ka helaan baaskiillada laga heli karo aaggooda. Kadib waxay doortaan baaskiil, waxay galaan lambarka aqoonsiga ama mari lambarka QR, oo way baxaan, mar labaadna way xiraan meel kasta oo ugu habboon iyaga. Ku darista mootooyinka elektaroonigga ah waxay howsha ka dhigeysaa mid waxyar ka qaalisan sidii caadiga ahayd: Gawaarida korontada, LimeBike waxay ku qaadataa $ 1 raacid ka dibna dollar kale 10 kii daqiiqo ee kasta oo la isticmaalo ah, taas oo u dhiganta $ 4 safar badhkeed ah Baaskiiladdeeda caadiga ah ee ku shaqeeya baaskiillada, marka la barbardhigo, waxay ka qaadaan $ 1 oo keliya 30kii daqiiqo ee fuushanba. Jump wuxuu kaa qaadayaa $ 2 nuska saac ee ugu horeeya iyo 7 senti daqiiqad kasta oo dheeri ah.
Waxaa jira caqabado qaar ka mid ah qaabkan, dabcan, oo ay ku jiraan sida loo hubiyo in baaskiil laga heli karo halka ay dadku ugu baahan yihiin. U boodku wuxuu ku tiirsan yahay kooxaha dhulka si loo dheellitiro nidaamkeeda. "Qeybta ugu weyn ee howlagalladu waa ragga ku jira baabuurada uruurinta baaskiiladaha, u adeegida mootooyinka, iyo u wareejinta baaskiillada sidii loogu baahdo," ayuu yiri Rzepecki. GPS iyo signalada signalada ayaa u oggolaanaya kooxuhu inay calanka baaskiiladaha aan dhaqaaqin ku celiyaan meel caan ah.
Tags:kireysiga baaskiilka dadweynaha
Ka hor: Kusoo dhawow Shuangye 129th Online Canton Fair
Next: Xirmooyinka Bafang Mid Drive ee loogu talagalay Baaskiilada Korontada ee DIY